नेता माधवकुमार नेपालले चीन सरकारसँग किन गरेत छुट्टै सम्झौता !आखिर के गरेत सम्झौता चीन सरकारसँग ? - www.kchhakhabar.com
नेता माधवकुमार नेपालले चीन सरकारसँग किन गरेत छुट्टै सम्झौता !आखिर के गरेत सम्झौता चीन सरकारसँग ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २८, २०७४ समय: १२:१८:२२
काठमाडौँ नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपालले चीन सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ । नेपाल सांघाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेसन (एससिओ) पिपुल्स फोरमद्वारा चीनको सियानमा आयोजना भएको ‘क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धनः मानवताका लागि साझा भविष्य समुदायको संयुक्त निर्माण’ कार्यक्रममा भाग लिन चीन जानुभएका नेता नेपालले चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै चीनसँग नेपालले गरेका सहमति र सम्झौताको कार्यान्यवन गर्ने बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
‘वान बेल्ट एण्ड रोड’ मा नेपालले सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गर्दै एमाले विदेश विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका नेता नेपालले यसबाट नेपालले लाभ लिने बताउनुभयो । उच्च अधिकारीसँगको भेटमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच हुन लागेको एकताले चीन खुशी भएको उहाँले बताउनुभयो । “दुई पार्टीबीचको एकताको कुरालाई उहाँहरु निकै खुशी हुनुभयो । एकता घोषणासभाका लागिसमेत चिनियाँ प्रतिनिधिलाई निम्ता दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरु एकताको बेला नेपाल आउने कुरा गर्नुभएको छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएको नेता नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बारेमा पनि चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै नेता नेपाललाई नेपाल–चीन सम्बन्धमा अतुलनीय योगदान पु¥याएबापत त्यहाँको नर्थ वेष्ट विश्वविद्यालयले मानार्थ प्राध्यापक (प्रोफेसर) को उपाधिसमेत प्रदान गरेको छ । नेता नेपालले सो अवसरमा सान्सी प्रान्तको सियान विश्वविद्यालयमा रहेको नेपाल अध्ययन केन्द्रको उद्घाटनसमेत गर्नुभयो ।